Maxaa Caddaalad Caddaalad ah loo siinayaa
Helitaanka Cunnada waxay ka dhigan tahay in kuwa ugu nugul ee xuquuqdooda laga waayey bulshada Skyway ay heli karaan cunto caafimaad leh oo nafaqo leh. Nasiib darrose, deg-degga ah in la gaaro himiladan ayaa si aad ah u kordhay sababo la xiriira COVID-19 Xiisadda Faafa.
Heshiiska Nidaamyada Cunnada Magaalooyinka waxaa laga sameeyay barnaamijyada quudinta degdegga ah ee aan bilownay si aan u ilaalino bulshadayada inta lagu jiro xiisadda COVID-19. Waxaan ogaanay in nidaamka jira ee bangiyada cuntada iyo bakhaarrada aysan buuxinayn baahiyaha xubnaha bulshada ee Skyway, waxaanan u dhaqaaqnay sidii aan u buuxin lahayn waxyaabaha ka dhiman.
Waxaan ku tala jirnaa inaan sii wadno quudinta beesheena inta ay baahi jirto - inta aan ka shaqeyneyno inaan xirno meelaha banaan oo aan u dhaqaaqno dhanka Nidaamka Cuntada oo Caadi ah!
Caddaaladda Cuntada macnaheedu waa aqoonsiga iyo ka jawaabidda nidaam cunto oo jira oo ah caddaalad darro, sinnaan la'aan, iyo waxyeello, iyo ka shaqeynta nidaam cunto cusub oo taageera oo abuura sinnaan, caddaalad, iyo caafimaad dhammaan.
Sidee Caddaaladda Cuntadu u egtahay
Dad midabkoodu midabkeenna iyo bulshooyinkeenaba ku beeraya dhulkeenna
Mushahar lagu noolaado oo loogu talagalay qof kasta oo koray, wax ka qabta, wax kariya, oo qaybiya cuntada
Fursadaha waxbarasho iyo shaqo ee dadka ku jira beesheena saynisyahano, beeraley, u dooda, siyaasad dejiyeyaal, kuugga, barayaasha iyo door kasta oo nidaamka cuntada ah
Wada shaqeynta aan la leenahay walaalaheena Asaliga ah ee walaalaha ah ee dib u soo ceshanaya madaxbanaanida cuntada iyo dhulka
Ikhtiyaarro la awoodi karo oo lagu iibsado nafaqo iyo cunto cusub oo xaafaddayada ah
U-doodista dowladda, iskuulka, iyo siyaasadaha kale ee hay'adaha cunnada ee ka faa'iideysta dadka iyo deegaanka oo dhan
Caddaaladda Caddaaladda waxaa loola jeedaa DHAMMAAN dadku waxay helayaan cunto nafaqo leh, dhaqan ahaan khusaysa, cusub, oo ku wanaagsan cunista! Caddaaladda Cuntada waxaa loola jeedaa in awoodda nidaamka cuntada laga wareejiyo gacmaha shirkadaha iyo kuwa mudnaanta yar, iyo gacanta dadka iyo kuwa badan!
Nidaamka cuntada ee hadda ka jira Skyway wuxuu dadka deegaanka u diidayaa inay helaan cunnooyin caafimaad qaba iyo shaqooyin macno leh, mushahar fiicanna ka hela qaybta cuntada iyo beeraha.
Waxaan dooneynaa inaan ku mideyno bulshada hareeraha qorshe hawleedka Caddaaladda Cunnada oo abuuraya Nidaam Cunno Magaalo oo cusub oo taageera caafimaadka jirka, shucuurta iyo ruuxiga ah, fursadda dhaqaale, iyo hal-abuurka dhammaan dadka deggan Skyway.
Skyway waxay ku taal guriga ugu weyn ee Afrikaanka-Ameerikaanka ah ee ku yaal gobolka Washington, iyo Nidaamka Cuntada Magaalooyinka ee 'Pact' wuxuu u dabaaldegaa oo xarumo u noqdaa hoggaanka Madow ee dib-u-maleynta Nidaamkeenna Cuntada Magaalada.